Qeybta 1: Maxay tahay sababta aad ugu baahan tahay in ay ku xidhmaan Android inay TV?
Qeybta 2: Sida loo Connect Android inay TV?
Kiniiniyada iyo telefoonada waa doorasho ku haboon qofka isticmaala, si kastaba ha ahaatee haddii aad rabto inaad daawato sawiro aad jeceshahay ama videos on shaashad weyn, ka dibna isku xidha aad telefoon Android ama kiniin ah in TV waa habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah in ay sidaa sameeyaan. Waxaa jira qaar ka mid ah fursadaha cable laga helo suuqa oo aad isticmaali kartaa isku xidha aad telefoon android ama kiniin ah in TV.
Waxaa jira dhowr jeer oo aad jeclaan lahayd in ay ku xidhmaan aad android in TV. Qaar ka mid ah xaaladood waxay ku taxan yihiin hoos ku qoran:
1. Si aad u daawato albums sawir: telefoonada Android smart iyo kiniiniyada waa doorashada ugu fiican ee la daawado shakhsi, balse waxa haddii qoyska oo idil waxa ay dooneysaa inay ku raaxaystaan ​​album safar sawirka qoyska ka mid ah? In seenyada noocan oo kale ah, waxaad doonaa shardi in la raadinaya shaashad weyn, halkaas oo aad usoo saari karnaa sawirada! Tani waa halka aad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan telefoonka android ama kiniin ah in TV.
2. Si aad u daawato filimada: Dadka guud ahaan muuqdaan in ay ku shuban ay telefoonada android smart iyo kiniiniyada la filimada si uu u daawado oo ay waqtiga firaaqada ah. Si kastaba ha ahaatee waa inuusan marna dhaawaceysaa qof inay ku raaxaystaan ​​filimada on screens weyn iyo haddii aad rabto inaad sidaas oo kale sameeyaan, ka dibna aad ku xidhi kartaa telefoonka smart android ama kiniin ah in TV oo wuxuu ku raaxaysan filimada aad jeceshahay in screen weyn!
3. kulan Play: Haddii aad tahay lover kulan, ka dibna waxa kale oo aad ku xidhi kartaa telefoonka smart / kiniin android in TV si ay u ciyaaraan ciyaaraha shaashadda weyn. Waxaad isticmaali kartaa tilmaamaha ah ee aad taleefan smart ama kiniin iyo arko saameynta ciyaaraha shaashadda weyn.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad in TV ku xidhi kartaa telefoonka smart android ama kiniin. Qaar ka mid ah siyaabaha waxaa ka mid ah:
Habka mid: Isticmaalka HDMI
Waxaad si fudud ku xidhi kartaa telefoonka smart ama kiniin ah in TV isticmaalaya HDMI. HDMI u taagan tahay High Qeexid Warbaahinta interface. Inta badan telefishanka hadda leeyihiin dekedda HDMI ah oo loo isticmaali karo in lagu xiro telefoonka smart android ama kiniin. Marka laga reebo jaban, waxa ay sidoo kale waa habka ugu fudud in ay ku xidhmaan aad telefoonada smart ama kiniin TV.
Fadlan raac tallaabooyinka hoose si aad ku xidhi telefoonka smart android ama kiniin ah in TV:
Tallaabada 1 koronto ee saldhigyadii HDMI ee TV
Tallaabada ugu horeysay waa inay furaysto in cable HDMI ee saldhig TV ee sida ku cad image hoose.
Tallaabada 2 koronto ee saldhigyadii HDMI ee smart phone / kiniin
Saldhigba HDMI ee telefoonka smart android ama kiniin aad uula mid tahay isku xira USB ah iyo waxaad ku shuban kartaa in darafka kale cable HDMI ee godka this.
Tallaabada 3 Dooro ikhtiyaarka u arkaysid HDMI
Marka aad android smart phone / kiniin TV oo xiran yahay, tallaabada xigta waa in la qeexo goobaha ee la mid ah. Waxaad dooran kartaa xalka wax soo saarka, faylasha aad rabto inuu u ciyaaro iyo wax ka badan! Waxa kale oo aad dooran kartaa fursad u ah "Mirror soo bandhigay" oo faa'ideysan doonaa shaashadda telefoonka android on TV.
Habka 2: wirelessly Connection
Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa telefoonka smart android ama kiniin ah in aad TV wirelessly. Waxaa jira qalab dhowr ah laga helo suuqa kaa caawin kara in aad wirelessly xiro qalabka android si aad u TV. Qalabka waxaa ka mid ah Chromecast, Roku, Miracast iwm Waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah qalabka sida in ay ku xidhmaan TV wirelessly.
Fadlan raac tallaabooyinka hoose si aad ku xidhi telefoonka smart / kiniin android in TV wirelessly:
Tallaabada 1 koronto ee dongle Miracast ah
Tallaabada ugu horeysay waa inay furaysto ee dongle Miracast ee TV iyo beddelaan nooca aqbasho waxaa si. Marka xirnayn, aad TV haatan u shaashad taas oo ku weydiin doonaa inaad isku xiro qalab ku haboon si ay u.
Tallaabada 2 noqda soo bandhigay wireless on qalab aad
Marka TV diyaar u yahay inuu ku soo bilowdo xidhiidhinaya qalabka, waxaad u baahan tahay in ay beddelaan soo bandhigay ee wireless ah ee aad taleefan smart / kiniin android. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo gujinaya Display bandhigay Wireless. Hubi in shaashadda toggle wireless waa ON. Pop khuseeya A sidii ay qalabka Miracast ee aad isticmaalayso bandhigo si user ah.
Tallaabada 3 Dooro qalab android on TV
Talaabada ugu dambaysa waa in aad TV doorato qalabka aad android. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo furitaanka ee "Qalabka" tab. Qalabka Project dar bandhigay wireless. Miracast si toos ah u raadin doona qalab iyo mid la heli karo dooran.
> Resource > Video > Sida loo Connect Android inay TV: U tag Phone ama Tablet Apps on Big Screen?